Ny alikako dia manenjika ny vavony foana, maninona? | Tontolo alika
Ilay orona Izy io dia iray amin'ireo faritra mahasoa indrindra amin'ny anatomin'ny alika, nomena ny fahaizany olfactory lehibe. Izany koa dia mahatonga azy io ho iray amin'ireo faritra marefo sy mora tohina indrindra ao aminy; ho fanampin'izay dia miharihary amin'ny tranga ivelany izy io. Izany rehetra izany dia mahatonga azy io ho mora tohina amin'ny olana sasany, toy ny fahasosoran'ny hoditra na ny tsy fahazakana. Matetika ny alika dia manandrana mampitony ireo fahasosorana ireo amin'ny fikororohana tsy tapaka.
Ny iray amin'ireo antony matetika mahatonga an'io olana io dia ny alergia, mahazatra indrindra amin'ny lohataona. Na dia miteraka mangidihidy amin'ny sisa amin'ny vatana aza izy ireo matetika, dia mahazatra azy ireo ny manomboka voalohany amin'ny fofona. Ny allergy polen, ohatra, dia miteraka fitohanana mafy eo amin'ny orona, izay misy fiatraikany mivantana amin'ity faritra ity, miaraka amina sneeze sy conjunctivitis, ankoatry ny soritr'aretina hafa. Misy zavatra mitovy amin'izany mitranga amin'ny allergy amin'ny vovoka sy singa hafa, izay mety hiteraka fivontosana sy mena ihany koa amin'ny orona sy molotra.
Azontsika jerena ao amin'ny fanafihana bibikelyIray amin'ireo mampidi-doza indrindra ny fandefasana filaharana kesika. Raha tsikaritray fa voan'ny mangidihidy mafy ao am-bavony ny alikantsika dia tsy maintsy mandeha haingana any amin'ny mpitsabo biby isika satria azo inoana fa nifandray tamin'io bibikely mampidi-doza io izy.
Antony iraisana iray hafa ny fampidirana ny vatan'ny vahiny ao am-bavorony, toy ny spikes kely. Raha tsy manasitrana haingana io olana io isika dia mety hiteraka aretina mitera-doza.
Etsy ankilany, ny alika dia mety hijaly amin'ny dermatolojika izay miteraka fisehoan'ilay mangidihidy ao am-bava. Ohatra iray ny pemphigus sy pemphigoids, aretin-ketsa iray izay mahatonga ny vatan'ilay biby hanafika azy, ka anisan'izany ny soritr'aretina hafa, ny mangidihidy amin'ny molotra, ny fikororohana ary ny fivontosana ao amin'ilay faritra.
Azo inoana koa fa mijaly ny alika sasany fanovana amin'ny lalan'ny orona, izay misy soritr'aretina mety ho lasa matotra kokoa: mandeha ra, carcinomas, tsy fetezana ao am-bava, sns. Izy io dia miteraka fahasamihafana eo amin'ny taolana izay mety hiteraka olana lehibe.
Raha sendra misy ireo famantarana ireo dia tsy maintsy mandeha any amin'ny tobim-pahasalamana biby azo antoka izahay, satria ny mangidihidy amin'ny vavony dia mety hitarika fivontosan'ny lalan'ny orona, mitarika ny asphyxia an'ilay biby.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Ny alikako dia manenjika ny vavony foana, maninona?
Ny maha-zava-dehibe ny fofon'ilay alika